Taliyihii Booliska Awdal oo loo bedalay Gobolka Tog-dheer, xilkiina ku wareejiyay Ku Xigeenkiisii | Somaliland.Org
Taliyihii Booliska Awdal oo loo bedalay Gobolka Tog-dheer, xilkiina ku wareejiyay Ku Xigeenkiisii
February 24, 2013	Boorame (Somaliland.Org)-Taliyahii hore ee Qaybta Booliska Gobolka Awdal Axmed Cabdiraxmaan Xasan ayaa xilkii taliyanimo ku wareejiyey ku simaha cusub ee taliyaha qaybta ahna ku xigeenka Taliyaha booliska ee Gobolkaasi Cismaan Warsame Xijaab.
Taliyaha qeybta Booliska Awdal ayaa loo bedalay Gobolka Tog-dheer.
Mas’uuliyiin ka kala socota maamulka iyo ciidamada ayaa soo qeyb galay munaasabadda xil wareejinta, waxaana hadal ka jeediyey Badhasaabka gobolka Awdal Cabdoo Axmed Aayir oo uga mahad celiyey taliyahii hore ee Booliska hawshii wanaagsanayd ee uu ka soo qabtay Gobolka mudadii uu joogay.
Taliyahii hore ee Booliska Gobolkaasi Axmed Ilkacase ayaa sheegay inuu Taliyaha cusub ku wareejinayo saldhig cusub oo gacanta lagu hayo iyo xarumahii hore ee ay ku shaqayn jireen booliska Awdal, halka sidoo kalena uu uga mahadceliyey salaadiinta iyo dadweynaha gobolka sidii wanaagsanayd ee ay nabadgelyada ugala shaqeeyeen mudadii uu halkaas ka hawlgelayey.
Munaasabadaasi waxaa kale oo hadalo dhiirrigelin iyo mahadcelin isugu jira ka soo jeediyey mas’uuliyiin ay ka mid yahiin ku simaha taliyaha Booliska ee Gobolka Awdal Cismaan Warsame Xijaab iyo badhasaabkii hore Axmed xaddi Sidci.
Previous PostGuddi loo Xil saaray Warshadda Laydhka Oo Ku Baaqay In Meesha laga Saaro Maamulkii WarshadaasiNext Post“Waxaan ku faraxsan nahay in xisbigii ururkii sadexaad nagu soo biiray, wada hadalna noo socdo…”	Blog